Ahoana ny fomba famoronana fampahatsiahivana amin'ny Google Assistant amin'ny Android | Androidsis
Ahoana ny fomba famoronana fampahatsiahivana amin'ny Google Assistant
Google Assistant dia nanao anarana ho an'ny tenany amin'ny finday Android. Azontsika atao ny mampiasa ny mpamosavy karazana asa rehetra Amin'izao fotoana izao. Azo atao koa ny mampiasa azy io ho fampahatsiahivana, Ka ny mpanampy no miandraikitra ny fampahatsiahivana amintsika ny fanendrena na ny asa tokony hataontsika. Mora be ny afaka mangataka anao hanao an'ity amin'ny telefaona.
Raha liana amin'ny fampiasana fampahatsiahivana miaraka amin'ny Google Assistant ianao, dia asehonay anao ny fomba ahafahantsika manao izany amin'ny Android. Ho fanampin'ny fanomezana anao tetika sasany hahamora kokoa ity fizotrany ity, satria zava-dehibe ny hitadiavana tena marina amin'ny fomba anontaniantsika ny mpanampy.
Voalohany dia tsy maintsy ampiasaintsika ny Google Assistant amin'ny Android, amin'ny alàlan'ny baiko "OK, Google" na amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny bokotra Home amin'ny telefaona. Avy eo, tsy maintsy mangataka aminy isika mba hampahatsiahy zavatra, hoy ny lahasa, ankoatran'ny milaza fotoana manokana anao. Ohatra "OK Google, ampahatsiahivo ahy amin'ny 22:00 PM mba hamoaka ny fako."
Raha voaray tsara, ho hitantsika fa hisy fampahatsiahivana amin'ny finday. Avy amin'ny zavatra efa fantatsika, manana porofo isika, fa voarainy ary ny mpamosavy no nanodina azy tsara. Raha tsy izany ny tranga dia tsy maintsy hizahan-toetra azy indray isika, mandra-pisehoan'ny fampahatsiahivana voalaza.
Azontsika atao ny mangataka amin'ny Google Assistant hampahatsiahy antsika zavatra sarotra kokoa, miaraka amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Ny lakileny rehefa mampiasa an'ity endri-javatra ity dia tokony hazava. Raha momba ny fotoana nifanarahana dia lazao mazava tsara hoe aiza no misy azy, ny daty sy ny ora ary ny antsipiriany sasany. Ny fahitana fohy dia manampy antsika hanamora ny famoronana fampahatsiahivana.
Raha tsy mahatakatra anay ny mpanampy Google, hangataka data fanampiny, izay hamoronana izany fampahatsiahivana izany. Fa raha manome anao ny angon-drakitra amin'ny fomba mazava na voalamina tsara izahay, dia tsy tokony ho olana velively. Ka io fampahatsiahivana io dia hamboarina amin'ny Android ao anatin'ny segondra vitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android cheat » Ahoana ny fomba famoronana fampahatsiahivana amin'ny Google Assistant
[Lahatsary] Fiheverana voalohany an'ny Samsung Galaxy Note10 +